Free FLV ka MPEG Ntụgharị: tọghata FLV ka MPEG na mfe
> Resource> Free> Top 5 Free FLV ka MPEG Ntụgharị
Ị na-achọ iji tọghata gị FLV faịlụ ka MPEG faịlụ Ọkpụkpọ? Ebe a bụ ụfọdụ ngwa na ike ga-eji iji nweta a n'ụzọ dị irè. The isi ka nke a bụ na ndị a ngwa bụ nnọọ free na ha na-àgwà mmepụta. Mbụ ngwa na anyị na ndepụta bụ
Free MP4 Video Ntụgharị
Online Video Ntụgharị
Nke a bụ ihe ịrịba ama free Video Ntụgharị ngwa. Ọ na-mepụtara maka ma Windows na Mac arụ ọrụ usoro. Na a ngwa, i ji n'aka na a na-ezighị ezi video faịlụ Ọkpụkpọ gaghị ebibi gị n'abalị. E wezụga akakabarede nke faịlụ format, a ngwa-enye ohere ọkụ Ntụgharị faịlụ ka DVD. Ọ atọghata karịa ugboro 25 ngwa ngwa karịa ot converters, na-akwado ihe karịrị 140 faịlụ formats. Ọzọkwa a ngwa-enye ọrụ nhọrọ nke na-eme ka ntọala na optimizes mmepụta faịlụ maka iPhones, iPad na ndị ọzọ na mobile Ngwa.
Nke a bụ free windows dabeere na ngwa na-e mepụtara maka na ntughari nke FLV video faịlụ Ọkpụkpọ na MPEG faịlụ Ọkpụkpọ. Otú ọ dị, na arụmọrụ nke a ngwa na ọ bụghị nanị nke a. Ọ na-atọghata gaa MP4, 3GP, mpg, AVI, WMV na SWF faịlụ formats. Nke a ngwa nwekwara ike-eji dọwara DVD faịlụ ka video na dọwara ọdịyo faịlụ site CD.
Ndị ọzọ functionalities nke a free Ntụgharị bụ na ọ nwere ike imezi mebiri emebi faịlụ, na-eweghachiri ha ka ha a playable ọnọdụ. Ọ compresses file size, na-eme ha nta ma ọ na-akwado n'elu 60 asụsụ.
Nke a bụ a MAC dabeere akakabarede software na bụ a otutu ngwa ngwa karịa QuickTime Pro. Ọ dị mfe iji dị ka ọ na-akwado ndị Dọrọ na dobe atụmatụ. Ị nwere ike họrọ size nke mmepụta faịlụ si ma TV ihuenyo size ma ọ bụ iPod. The New version 1.5.2 nke iSquint nwere ụfọdụ ọhụrụ atụmatụ dị ka Nsonye nke "Debreaker". Nke a na-enye ohere mebiri emebi faịlụ ka a rụzie na ugboro. N'ihi obere faịlụ na-egwu ngwa otú ahụ, ha na-agaghịkwa weere ya na njehie.
Free MP4 Video Ntụgharị (Windows)
Nke a dere nza nke free software ibudata. Sitere na site FLV ka MPEG Ntụgharị, YouTube ka DVD Ntụgharị, Video ka MP3 Ntụgharị na FLV ka MPEG Ntụgharị. Ndị a niile free ngwa na dị ukwuu uzo ozo ka ụgwọ omume. Nke a video Ntụgharị bụ pụrụ ịdabere na nchebe, adabara na ntughari nke video na ọdịyo faịlụ na-ere ọkụ ha ka ha CD.
Free online video Ntụgharị (Online Ntụgharị)
Nke a bụ ihe online dabeere video Ntụgharị. Ọ dịghị mkpa na maka ala ibu na ọ dịghị email nkwenye. Na ala na mma nke na iji ngwa-eme ka ọ a chọrọ nhọrọ. Mma ka, ọ bụkwa free iji.
Mgbe ọzọ ị chọrọ onye ngwa n'ihi na ntughari nke FLV ka MPEG faịlụ Ọkpụkpọ, na-obi ike na ndị a faịlụ kwuru n'elu ga-izute gị mkpa. Ha na-free, ha na-pụrụ ịdabere na irè. Were uru nke ha taa.
Olee otú iji tọghata MOV ka MPEG na Mac / Windows
Top 5 Best Free MOV Video egbutusị
Top 5 Best Free DivX Video egbutusị
Top 5 free MOV Ntụgharị